चयन हटाउनुहोस्: Salesforce AppExchange को लागि मार्केटिङ डेटा सक्षमता समाधान | Martech Zone
मार्केटरहरूका लागि ग्राहकहरूसँग स्केल, छिटो र प्रभावकारी रूपमा 1:1 यात्राहरू स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिएको सबैभन्दा प्रयोग गरिएको मार्केटिङ प्लेटफर्महरू मध्ये एक Salesforce मार्केटिङ क्लाउड (SFMC).
SFMC ले सम्भावनाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ र मार्केटरहरूलाई उनीहरूको ग्राहक यात्राको विभिन्न चरणहरूमा ग्राहकहरूसँग जोडिने अभूतपूर्व अवसरहरूसँग बहु-कार्यात्मकतालाई संयोजन गर्दछ। मार्केटिङ क्लाउडले, उदाहरणका लागि, मार्केटरहरूलाई तिनीहरूको डेटा मोडेलहरू परिभाषित गर्न मात्र सक्षम बनाउँदैन, तर धेरै डेटा स्रोतहरू एकीकृत वा अपलोड गर्न पनि पूर्ण रूपमा सक्षम छ, जसलाई डेटा विस्तारहरू भनिन्छ।
SFMC द्वारा प्रस्ताव गरिएको विशाल लचिलोपन मुख्य रूपमा यस तथ्यलाई श्रेय दिइएको छ कि मार्केटिङ क्लाउडमा धेरै कार्यहरू SQL क्वेरीहरूद्वारा सञ्चालित छन्। मार्केटिङ गतिविधिहरू जस्तै विभाजन, व्यक्तिगतकरण, स्वचालन, वा रिपोर्टिङलाई मार्केटिङ क्लाउडमा डेटा विस्तारहरू फिल्टर, समृद्ध, वा संयोजन गर्न मार्केटिङ क्लाउडमा छुट्टै SQL क्वेरी आवश्यक हुन्छ। केहि मार्केटरहरूसँग मात्र SQL प्रश्नहरू लेख्न, परीक्षण गर्न र डिबग गर्ने ज्ञान र सीप छ, जसले विभाजन प्रक्रियालाई समय-उपभोग गर्ने (यसैले महँगो) र प्रायः त्रुटिहरूको खतरा बनाउँछ। कुनै पनि उद्यममा सबैभन्दा सम्भावित परिदृश्य भनेको मार्केटिङ विभागले SFMC मा तिनीहरूको डेटा व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक वा बाह्य रूपमा प्राविधिक समर्थनमा निर्भर हुन्छ।
DESelect Salesforce AppExchange को लागि मार्केटिङ डेटा सक्षमता समाधानहरू प्रदान गर्न माहिर छ। यसको पहिलो ड्र्याग-एण्ड-ड्रप समाधान, DESelect Segment विशेष रूपमा कुनै कोडिङ अनुभव नभएका मार्केटरहरूका लागि सिर्जना गरिएको थियो, जसले तिनीहरूलाई स्थापनाको केही मिनेटमा तुरुन्तै उपकरण प्रयोग गर्न सक्षम पार्दै तिनीहरूको लागि लक्षित समूहहरूको विभाजनको साथ तुरुन्तै सुरु गर्न सक्छन्। अभियानहरू। डिसेलेक्ट सेगमेन्टको साथ, मार्केटरहरूले एकल SQL क्वेरी लेख्नु पर्दैन।
निगमहरूका लागि सेल्सफोर्स मार्केटिङ क्लाउडमा ROI बढाउन DESelect सँग तयार समाधानहरूको दायरा छ:
खण्ड चयन नगर्नुहोस् चयनहरू मार्फत सहज तर शक्तिशाली विभाजन सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। चयनहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई डेटा स्रोतहरू संयोजन गर्न र SQL क्वेरीहरूको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा खण्डहरू उत्पन्न गर्न फिल्टरहरू लागू गर्न अनुमति दिन्छ। उपकरणको लागि धन्यवाद, प्रयोगकर्ताहरूले SFMC मा 52% छिटो विभाजन कार्यहरू गर्न सक्छन् र मार्केटिङ क्लाउड द्वारा प्रदान गरिएका धेरै सम्भावनाहरूको पूर्ण उपयोग गर्न जारी राख्दै, %23 सम्म छिटो आफ्नो अभियानहरू सुरु गर्न सक्छन्। DESelect ले मार्केटरहरूलाई तिनीहरूको सञ्चार स्वतन्त्र रूपमा (बाह्य विशेषज्ञहरूको आवश्यकता बिना) र पहिलेभन्दा धेरै रचनात्मकताका साथ खण्ड, लक्षित र निजीकृत गर्न सक्षम बनाउँछ।
जडान हटाउनुहोस् मार्केटिङ डाटा एकीकरण समाधान हो जसले मार्केटिङ स्वचालन पेशेवरहरूलाई वेबहुक्स (एपीआई) सेल्सफोर्स मार्केटिङ क्लाउड र/वा सेल्सफोर्स सीडीपी र पछाडि, ड्र्याग-एन्ड-ड्रप सुविधाहरू प्रयोग गरेर। ठूला एकीकरण उपकरणहरूको विपरीत, DESelect Connect कार्य-स्मार्ट मार्केटरहरूका लागि बनाइएको छ, यसलाई अन्य समाधानहरूको तुलनामा कम मूल्यमा, र प्रयोग गर्न धेरै सजिलो बनाउँदै। सबै डिसेलेक्ट उत्पादनहरू जस्तै, जडानलाई स्थापना वा सेटअपको लागि कुनै पनि डाउनटाइम आवश्यक पर्दैन, तपाईंले मात्र प्लग-एन्ड-प्ले गर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई आत्म-होस्टिङको आवश्यकता पर्दैन र API कलहरूको संख्यामा SFMC सीमाहरूसँग डिजाइन गरिएको छ।
खोज हटाउनुहोस् नयाँ होइन, यो उपलब्ध छ र अझै पनि क्रोम एक्सटेन्सनको रूपमा छ जसले मार्केटरहरूलाई उनीहरूको मार्केटिङ क्लाउडमा सजिलैसँग कुनै पनि कुरा खोज्न मद्दत गर्दछ। पूर्ण रूपमा एकीकृत खोज पट्टीले तपाईंलाई डेटा विस्तारहरू खोज्न अनुमति दिन्छ, जसमा:
यस महिना, डिसेलेक्टले पनि सर्च इन जारी गर्‍यो AppExchange। सेल्सफोर्स बजारमा उत्पादन थप्ने निर्णय क्रोम विस्तारहरूलाई समर्थन नगर्ने संस्थाहरूमा काम गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लोकप्रिय मागको कारण थियो। अब, प्रत्येक मार्केटिङ क्लाउड प्रयोगकर्ताले यस प्रयोगकर्ता-अनुकूल र समय बचत उपकरणको फाइदाहरू पाउँछन्।
खण्ड सुविधाहरू चयन नगर्नुहोस्
डेटा विस्तारहरू सँगै जोड्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले सजिलैसँग डेटा विस्तारहरू सँगै सामेल हुन र तिनीहरू कसरी सम्बन्धित छन् भनेर परिभाषित गर्न ड्र्याग-एन्ड-ड्रप प्रयोग गर्न सक्छन्। प्रशासकहरूले यी सम्बन्धहरू पूर्व-परिभाषित गर्न सक्छन्।
अभिलेखहरू बहिष्कार गर्नुहोस् - डाटा एक्सटेन्सनमा सामेल हुने जस्तै, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो चयनबाट बहिष्कार गर्न चाहेका रेकर्डहरू देखाउन सक्छन्।
डाटा स्रोतहरू जोड्नुहोस् - यो संग सजिलो छ चयन रद्द गर्नुहोस् विभिन्न डेटा स्रोतहरूबाट सम्पर्कहरू सँगै जोड्न।
फिल्टर मापदण्ड लागू गर्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले सबै फिल्ड ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दै डेटा विस्तार र स्रोतहरूमा धेरै फिल्टरहरू लागू गर्न सक्छन्।
गणनाहरू प्रदर्शन गर्नुहोस् - ग्राहकले कति खरिद गरेको छ वा ग्राहकले कति खर्च गरेको छ भन्ने जस्ता उपक्वेरीहरूले डेटाको सङ्कलन र गणनाहरू प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ।
क्रमबद्ध र सीमित परिणामहरू - प्रयोगकर्ताहरूले तिनीहरूको नतिजाहरू वर्णमाला, मिति द्वारा, वा तार्किक कुनै अन्य तरिकाले क्रमबद्ध गर्न सक्छन्। यदि आवश्यक भएमा तिनीहरूले परिणामहरूको संख्या पनि सीमित गर्न सक्छन्।
पिकलिस्टहरू परिभाषित र प्रयोग गर्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले व्यवस्थापकको रूपमा पिकलिस्ट मान र लेबलहरू तोक्न सक्छन्, उनीहरूको टोलीलाई थप निश्चितताका साथ फिल्टर गर्न सक्षम पार्दै।
म्यानुअल वा नियम-आधारित मानहरू सेट गर्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले म्यानुअल वा नियम-आधारित मानहरू सेट गरेर, उदाहरणका लागि, तिनीहरूका परिणामहरू निजीकृत गर्न सक्छन्। महिला बन्छ मिस र पुरुष बन्छ मिस्टर.
नियमहरूसँग रेकर्डहरू डुप्लिकेट गर्नुहोस् - रेकर्डहरू एक वा धेरै नियमहरू मार्फत डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ, निश्चित प्राथमिकता दिएर।
झरना विभाजन प्रयोग गर्नुहोस् - प्रयोगकर्ताहरूले 'झरना विभाजन' प्रयोग गर्न क्यास्केडिङ नियमहरू लागू गर्न सक्छन्।
सफलताका कथाहरू हटाउनुहोस्
हाल, DESelect भोल्भो कार युरोप, T-Mobile, HelloFresh, र A1 Telekom जस्ता विश्वव्यापी ब्रान्डहरूद्वारा विश्वसनीय छ। एप स्थापना मितिदेखि तयार भएता पनि प्रारम्भिक चरणमा तालिम र समर्पित सहयोग पाइने आफ्ना ग्राहकहरूसँग घनिष्ट सम्बन्ध राख्ने कम्पनीको नीतिले निरन्तर सफलताका कथाहरूको लागि अनुमति दिएको छ।
पन्ना केस स्टडी: क्यालिफोर्निया-आधारित Emerald ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष र इमर्सिभ B2B घटनाहरू र ट्रेड शोहरूको अपरेटर हो। 1985 मा स्थापित, यो बजार-अग्रणी ब्रान्डले 1.9 घटनाहरू र 142 मिडिया गुणहरूमा 16 मिलियन भन्दा बढी ग्राहकहरूलाई जोडेको छ।
Emerald भर्खरै SFMC प्रयोग गर्न थाले। क्लाउड प्रयोग गरेपछि चाँडै, तिनीहरूको मार्केटिङ स्वचालन टोलीले SQL क्वेरीहरूमा कत्तिको भारी निर्भरता छ भनेर पत्ता लगायो, कुनै SQL विशेषज्ञता बिना मार्केटरहरूको लागि प्रयोगकर्ता-अनुकूल समाधान बिना। तिनीहरूले पहिले नै डेटा विस्तारहरू निर्माण गर्न असक्षमताहरू फेला पारे र सबै क्षेत्रहरू पहिले नै परिभाषित गर्नु पर्ने लचकतासँग संघर्ष गरे।
DESelect प्रयोग गर्नु अघि, Emerald का मार्केटरहरूसँग डाटाबेस पहुँच थिएन, किनकि तिनीहरूको केन्द्रीय टोलीले पहिले खण्डहरू बनाएको थियो। DESelect ले Emerald लाई आफ्नो मार्केटिङ टोलीलाई कुशलतापूर्वक र स्वतन्त्र रूपमा खण्डहरू सिर्जना गर्दा डेटा पहुँच र व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउन मद्दत गर्यो। अब, तिनीहरूले आफ्ना SFMC प्रयोगकर्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा सक्षम बनाउन मार्केटरहरूलाई DESelect रोल आउट गर्न पनि हेर्छन्।
DESElect ले 50% ले दक्षता बढाएको छ। अहिले केही तदर्थ गर्न धेरै सजिलो छ।
ग्रेगरी नाप्पी, वरिष्ठ निर्देशक, इमराल्डमा डाटा व्यवस्थापन र विश्लेषण
कसरी बारे थप जान्नको लागि चयन रद्द गर्नुहोस् तपाईंको संगठनलाई मद्दत गर्न सक्छ:
DESElect मा जानुहोस् डेमो चयन नगर्नुहोस्
टैग: a1 टेलिकमAPIआदान प्रदानस्वचालन खोजक्रोम एक्सटेन्सनसामग्री खोजडाटा विस्तारडाटा विस्तार जडानडाटा विस्तार विभाजनअचयन गर्नुहोस्इमेल खोज पठाउँछइमेल टेम्प्लेट खोजईमेल टेम्प्लेटहरूEmeraldफिल्टर परिभाषा खोजगुगल क्रोम विस्तारग्रेगरी नाप्पीनमस्ते ताजाक्वेरी गतिविधि खोजक्वेरी खोजबिक्री बलसेल्सफोर्स एप एक्सचेन्जसेल्सफोर्स सीडीपीसेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउडsfmct-मोबाइलभोल्भो कार युरोप
एन्थोनी सीईओ र सह-संस्थापक हुन् चयन रद्द गर्नुहोस्, Salesforce AppExchange को लागि मार्केटिङ डेटा सक्षमकर्ता। उहाँ सेवा, मार्केटिङ स्वचालन, र सेल्सफोर्स मार्केटिङ क्लाउड प्रविधिहरूको रूपमा सफ्टवेयरको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ।
तपाईंको LinkedIn प्रोफाइल फोटो कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
सेल्सफोर्स मार्केटिङ क्लाउडमा स्वचालित गुगल एनालिटिक्स UTM ट्र्याकिङ कसरी सक्षम गर्ने